Patricia Torvalds: mutsivi wenhaka yababa vake? | Linux Vakapindwa muropa
Patricia Torvalds: Mwanasikana waLinus anongedzera nzira
Tove naLinus nevanasikana vavo Patricia, Daniela naCeleste
Linus Torvalds, iye mugadziri weLinux kernelAne vanasikana vatatu vakanaka nemukadzi wake Tove Torvalds: Patricia Miranda, dangwe rekuzvarwa muna 1996; Daniela Yolanda, uyo akasvika muna 1998; uye pakupedzisira iye Celeste Amanda mudiki, uyo aizozvarwa muna 2000. Vanasikana vatatu vane mazita ekuSpanish uye avo pasina mubvunzo chisikwa chake chakanakisa, pamusoro peLinux kernel.
Zvakanaka, mukuru, Patricia Torvalds, atonongedzera nzira uye inogona kushandurwa kuita ramangwana Torvalds 2.0. Kana nguva yapfuura akataura nezve zvaizoitika kana Linus Torvalds asisiri Panotungamira, izvozvi anogona kusiya nhaka inopfuura tekinoroji, nevanasikana vanofarira tekinoroji, kana kuti Patricia ari ...
Iye zvino tave tichiziva izvozvo kunyange Patricia aida kutanga ave geneticist pakutangaIye zvino anoita kunge akachinja zvido zvake kumusoro uye anoita kunge anofarira makomputa uye zvirongwa. Kunyangwe Patricia achivimbisa kuti vabereki vake vakamupa rusununguko rwakawanda mune izvi, kunyangwe kumba kwavo vachishandisa kugoverwa kweLinux, hongu, baba vake havana kumbogara naye pamberi pekombuta kuti vamukurudzire kuti vatevere tsoka dzavo.
Patricia ari kupindawo nyika yesosi yakavhurika, kudzivirira huzivi uhu, pamusoro pechinzvimbo chevakadzi mune tekinoroji, kubatanidza femu kirabhu kudzivirira kutora chikamu kwevakadzi muzvikamu izvi. Ivo vekare veTorvalds vanoita kunge ndivo vakasarudzwa kupfuudzira chirongwa ichi kana pamwe vadiki Daniela naCeleste vanewo zvekutaura?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Patricia Torvalds: Mwanasikana waLinus anongedzera nzira
sho kana ndikaikanda: v #HailGrasa
Pindura kuna Algoru
Ndichariisa nhasi uye ndichaibvisa kana windows yaburitsa kodhi.
Ini handifunge kuti zvinehunhu kana hunhu kuita urwu rudzi rwekutaura ...
Kali Linux 2.0 iri kunze
Richard Stallman: Yakasarudzika Bvunzurudzo yeLxA